Faahfaahin Laga Helayo Dagaal Ka Dhacay Degmada Dayniile. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Dagaal Ka Dhacay Degmada Dayniile.
calamada July 31, 2018 1 min read
Saddex ka tirsan Maleeshiyaatka dowlada Ridada ayaa lagu dilay weerar xalay ay Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidan oo ku yaalla degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Mujaahidiinta ee ka howgala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in weerarka lagu beegsaday goob fariisimo ah oo ku taalla agagaarka gigada diyaaradaha degmada Dayniile, waxaana u suuragashay Mujaahidintu iney la wareegaan goobta.
Hub isagu jira qoryaha fudud oo kala ah 2 AK47, 1 M16 iyo Bastoolad ayaa laga furtay Ciidamadii goobta lagu weeraray, waxaana sidoo kale la gubay 2 gaari oo goobta yaallay.
Isla xalay ayay aheyd markii Mujaahidintu ay 2 qarax ku weerareen fariisimayaal ku yaalla degmooyinka Howlwadaag iyo Hodon, iyadoona ay muuqato in howlgallada Mujaahidiinta ee Muqdisho ay dardar xoog leh ku socdaan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 18-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 18-11-1439 Hijri.